कोह टच (कोह टुई) कोहा रोंग मा - आधिकारिक गाइड | Koh Rong भ्रमण गर्नुहोस्
कोह टच (एएए कोह टुई) कोह रोंगको मुख्य पर्यटक क्षेत्र हो। समुद्र तट सलाखों, रेस्टुरेन्ट, रात क्लब, गेस्टहाउसहरु, र बंगले देखि भरा छ। यद्यपि कोच टचको नाममा एक प्रतिष्ठा छ जीवंत पार्टी गन्तव्यत्यहाँ केहि उत्कृष्ट छन् शांत, पारिवारिक अनुकूल क्षेत्रहरू यहाँ पनि। एक राम्रो विचारको लागि यी केही भिडियोहरू हेर्नुहोस्:
कोमो टच कम्बोडो आइल्याण्डमा कम्बोडिया मा | Koh Rong भ्रमण गर्नुहोस्
सबै सजिलै संग सुलभ मुख्य नौका सेवाहरू, Koh टच कोहा Rong मा पुग्न सबै भन्दा सुविधाजनक स्थानहरु मध्ये एक हो। यो पनि सबैभन्दा 'सभ्य' हो, धेरै सानो पसलहरू, एक पैसा फिर्ता लिने तरिका, र डाक्टरको क्लिनिक।
Koh Koh को होटल खोज्नुहोस
कोह रोंग केहि सबैभन्दा उत्तम समुद्री जीवन को घर हो, यसैले Snorkelling र स्कूबा डाइविंग एक धेरै लोकप्रिय गतिविधि हो (कृपया लामो टाउको समुद्र तटमा Koh टच या रिफ डाइभ रिसोर्टमा Koh Rong Dive Center लाई बोल्नुहोस्)।
कोच टचमा, धेरै ठाउँहरूले स्नोर्कलिंग यात्राहरू व्यवस्थित गर्दछ जहाँ उनीहरूले टापुका वरिपरी असल स्थानहरूमा लिन्छन्। यो तपाईंको अद्भुत लघु पारिस्थितिकी प्रणालीहरू, कोरल, सीएन्डर्स, र नडिबाइब्रिन्सहरू जुन द्वीपहरूमा प्रचुर मात्रामा देख्न सक्ने तपाईंको उत्तम तरिका हो।
एक यात्रा बुकिङ धेरै सीधा अगाडी अगाडी छ - तपाईंले तिनीहरूलाई मुख्य समुद्र तटमा विज्ञापित देख्नुहुनेछ। एउटा ठेक्का स्नोर्कलिङ यात्रा माछा मार्ने, पनि देखिन सक्नेछ उज्यालो पल्टन, बीबीक्यू, र सनसेट। तिनीहरूले लगभग $ 10 खर्च गर्दछन् र 1pm - 7pm बाट हो।
यदि तपाइँ थोडा र बाहिर (यात्राको लागि लगभग $ 70) विभाजन गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामी सिफारिस गर्दछौँ एक निजी लामो डुङ्गा भर्ती गर्दै तपाईं पीनापापल आइलैंड तिर अगाडी उत्तर लाग्नु हुन्छ (तपाईं यस तरिका कोह रङ्ग को सम्पूर्ण यात्रा पनि गर्न सक्छन्)।
यहाँ वरिपरी केही शानदार प्रिस्टिन समुद्र तटहरू शानदार स्नोर्कलिङ स्थानहरू छन्, र यदि तपाइँ मन पराउँछन्, तपाईले स्थानीय प्रयास गर्न धेरै पटक रोक्न सक्नुहुन्छ। खमेर माछा माछाहरु (केवल एक प्लास्टिक बोतल र केहि माछा पकडने तार प्रयोग गरेर)।
तपाईंको वरपर चारैतिर तारिख आकाश जस्तो चमक गर्दै, कोह रङ्गको bioluminescent plankton एक अद्भुत दृष्टि हो जुन रातको समय हेरेर। (जान्नुहोस् किन उनीहरूले चमक गर्छन् विकिपीडिया)
यद्यपि यो घटना द्वीपहरूमा प्रचुर मात्रामा छ, उज्ज्वल प्लान्टन मात्र धेरै सानो उज्यालो प्रदूषणको ठाउँमा देख्न सकिन्छ।
यस्तो रूपमा, यदि तपाईं Koh टचमा बसिरहेका हुनुहुन्छ भने तपाइँलाई प्लान्टनको डुङ्गा भ्रमण गर्ने हो कि हेर्न को लागी सबै भन्दा सरल तरिका हो (तपाईं गैर-पार्टीका रातहरूमा पुलिस बीचमा जान सक्नुहुन्छ (मुख्य ढेरबाट बाँकी 15 मिनेट) र ट्री हाउस बंगला (XIUMX मिनेट मुख्य ढेरबाट सही छ), वा Koh टच बाट कोने को आसपास लामो सेट बीच सम्म पुग्नुहोस्।
भ्रमण बुकिङ धेरै सजिलो छ (तिनीहरू समुद्री किनारमा विज्ञापित छन्) र प्लान्ट हेर्नको लागि यात्रा $5(7pm मा छोडेर) खर्च हुनेछ। तपाईं डुङ्गा यात्राको समयमा प्लैंकटन पनि हेर्न सक्नुहुनेछ (माथि हेर्नुहोस्)।
यदि तपाईं एक सूर्य उत्साही हुनुहुन्छ (जो होइन !?), सर्वश्रेष्ठ सनसेट सामान्यतया कोहा रङको पश्चिमी र उत्तरी पक्षमा पाइन्छ Koh Rong Samloem.
केहि महान स्थानहरु मा शामिल छ: Sok San Beach Resort, रयल रेण्ड, र Lonely Beach Koh Rong, and मा'े बे, Lazy Beach, र सूर्यास्त बीच Koh Rong Samloem मा।
सुन्दर सफा पानीमा केही छिटो paced क्रियाकलापका लागि, तपाईले केडीई वाटरटर्पमा जेस्कीलाई भाडामा राख्न सक्नुहुन्छ बंदर द्वीप रिजर्ट) या सुनहरा बंगला मा। मूल्यहरू सीजनको आधारमा फरक फरक हुन्छन् (र कहिलेकाहीं दिनको मागमा) त्यसैले तपाईँले 150 घण्टाको मजाको लागि $ 1 भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया स्नोर्कलिङ वा डाइभिङको सावधान रहनुहोस्!
अर्को तर्फबाट मुख्य स्विमिंग क्षेत्रहरु बाट पवन को एक सा हुन सक्छ, जो windsurfing जस्तै गतिविधिहरु को लागि राम्रो छ। चाहे तपाईं एक विशेषज्ञ हो या एक शुरुवात हो, तपाईं सीख सकते हो या साथ windsurfing किराया रङ पवन (समुद्र तट मा रीफ मा - लन्ड सेट बीच)।
एक राम्रो दिन मा पानी धेरै सानो लहरहरु संग शांत हुन सक्छ - एक सानो साहसिक कार्य लागि आदर्श! तपाईं क्यानकलाई स्नोर्कलिङको लागि वा लङ्ग सेटमा म्याङ्ग्रोव नदीमा (4K) समुद्र तटको सानो टापुमा गर्न सक्नुहुन्छ। भाडाको लागी प्रति घण्टा $5प्रति घन्टा वा प्रति दिन 12 $ हो।
यदि साहसिक माथि धेरै अधिक काम जस्तै आवाज माथि, सुन्दर शांत पानी को लाभ ले केहि कोमल पैडल बोर्डिंग संग। केही स्थानहरू Koh Touch मा पेडल बोर्ड भाडाहरू - तपाईं त्यहाँ हुँदा मुख्य समुद्र तटमा कसैलाई सोध्नुहोस् (तपाइँ माथि माथि Rong Wind मा तिनीहरूलाई भाडा पनि गर्न सक्नुहुन्छ)।
कोड रङ्ग आइलैंड मा पैडल बोर्डिंग | Koh Rong भ्रमण गर्नुहोस्
यो हाई प्वाइन्ट जिप रेखा र रस पार्क रूखहरू बीच अवरोध अवरोध छ। संस्थापक उद्धरण गर्न, यो को लागि एक प्रकार को 'जंगल जिम' छ कि केहि सक्रिय मजा हुँदा अद्भुत जंगल दृष्य हेर्न चाहन्छु।
20 रस्काहरू रूखहरू बीच पर्खछन्, प्रत्येकलाई एक फरक चुनौती प्रस्तुत गर्दछ। उदाहरणका लागि, एक तंग्रो हो र एक क्षैतिज सीढी हो।
अब र त्यसोभए भरपूर तरिकाले तपाईले 'सजिलो' गतिविधिहरूको साथमा तपाईको कडा कामको लागि इनाम दिईएको छ: दुई जिप-लाइन पाठ्यक्रमहरू र स्विइंग र प्रति बैरल जुन पेन्टिङको बीचमा 24 मिटर सम्मको उचाइमा उड्छ।
उच्च रोप पार्क टाउको पत्ता लगाउन पुलिस बीच बीचको मुख्य ढोका बन्द भयो - तपाईले यो चिन्हहरू विज्ञापन विज्ञापन देख्नुहुनेछ। पाठ्यक्रम को लागत कम सीजन मा $ 25 र उच्च सत्र मा $ 35 हो।
यो एक शानदार दिन को यात्रा को लागि बनािन्छ, किनकी तपाईं आफ्नो वरपर धेरै कम मान्छे संग नरम र सज्जन सफेद सेतो समुद्र तट मा आराम गर्न सक्छन्।
यदि तपाईं धेरै फरक र रोमाञ्च गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ एक ब्लब जम्प छ ट्री हाउस बंगला.
यदि यो केहि चीज हो जुन तपाईले कहिल्यै प्रयास गर्नुभएन - तपाईले 4-6 मिटरको उचाइमा 'ठूलो' माथि ठूलो झण्डामा बोल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईं विपरीत अन्तमा जानुहुन्छ र एक मित्रले तपाईंलाई उछाल हावा र तल पानीमा उछाल गर्नेछ। यस उत्साहजनक अनुभव प्रति $3को लागी खर्च हुनेछ।
लङ सेट (4K) बीचको पैदल यात्रा गर्नुहोस्
यदि तपाईं दर्शनीयकरणको प्रशंसक हुनुहुन्छ भने त्यहाँ छ शानदार पैदल यात्रा टापुमा। हामीले दिमागमा हिँड्ने बाटो हो पुरा वीटा र लामो सेट रिजोर्ट, सही रूपमा शीर्षक छ कि तपाईं Koh टच को मुख्य भागमा नौका टाढा जानु।
अब, सामान्यमा, यदि तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ भने शान्त गन्तव्य Koh Rong मा, Koh Touch को यस भाग मा केहि शानदार रिसोर्ट्स (हामी सिफारिस गर्दछौं सेतो बीच बंगला र ट्री हाउस रिसोर्ट, साथै प्रमोदवन बंगला)। यद्यपि, यदि तपाइँ यहाँ बस्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ निश्चित रूपमा यो क्षेत्रलाई तपाईंको प्रवासको समयमा हेर्न प्रयास गर्नुपर्दछ किनकि समुद्र तट एक ठुलो अवस्थामा छ र सागर पानी महसुस हुन्छ।
यदि तपाईं आफ्नो बायाँ हातमा अतीत प्रमोदवन बङ्गले र व्हाइट बीच बंगलाको टाउकोमा टाउको हाउस हुनुहुन्छ भने अर्को रिसोर्ट हो। समुद्र किनाराको वरिपरि पछ्याउँदै हिंड्नुहोस् र तपाईं स्टार माछा रिसोर्ट पास गर्नुहुनेछ। कहिलेकाहीं तपाईलाई वास्तविक समुद्र तट आफैं जंगलमा जान आवश्यक छ, तर बाटो पछ्याउन सजिलो छ। लगभग 15 मिनेट पछि तपाईं सानो विकासको बारेमा (ठूलो 4km वा यति बारेमा) बाहिर जानुहुन्छ (यस समुद्र तटको अगाडि केहि रिसोर्टहरू छन् र दुई थप प्लानहरू छन्, तर तिनीहरू प्रारम्भिक अवस्थाहरूमा छन्)।
लामो सेट समुद्र तट कोह रोंग मा
एटीएम: कोह टच कोह रोङ मा एक मात्र स्थान हो जहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ नकद फिर्ता लिनुहोस्। यो अब गर्न पनि सम्भव छ पखेटा ट्राफिक, मोबाइल फोनमा लिईयो।
मूल्य: औसतमा, कोह टच कोह रोंग / कोह रङ सामुममा रहन सस्तो ठाउँ हो। यद्यपि दुवै टापुहरूमा विकल्पहरू छन्। कोह टचमा, $ 10 / रातमा सबैभन्दा आधारभूत आवास सुरू हुन्छ, र $ 70 / रातसम्म पुग्छ (निजी बाथरूम, ठूलो आरामदायक बेड, आदि सहित एक विशाल बंगलाको लागि)।
प्रश्न: Koh टच भ्रमण गर्ने सबैभन्दा राम्रो समय कहिले हुन्छ?
Q: म कसरि Koh Touch मा पुग्छु?
क: Koh छ टचमा एटीएम छ?
क: क्या छ टचमा एक मेडिकल सुविधा छ?
A: कोह टच भ्रमण गर्ने सबैभन्दा राम्रो समय नोभेम्बरको मध्य र मेटिको बिचमा रहेको छ। यी महिनाहरूमा तपाईसँग धेरै सानो बादल र कम नमीले सुन्दर गर्मी दिन हुनेछ। यस अतीत मा औसत तापमान को एक न कुनै विचार दे:
A: अहिले त्यहाँ सिहानकोभिले कोहा टचबाट5आधुनिक नौका सेवाहरू छन् - स्पीड फेरी कम्बोडिया, द्वीप स्पीड बोट कम्बोडिया, Buva Sea, Angkor Speed ​​Ferry, र GTVC। (त्यहाँ केहि $ 5- $ 10 'स्लो नाव' सेवाहरू छन् जसले 1.5 - 2.5 घण्टा लिन सक्छ - यी सेवाहरू पेशेवर चलिरहेको छैन र सिफारिस गर्दैनन्).
यो पहिलो टिन हो भने Koh टच पियर पाउनको लागी 40 मिनेट लिन सक्नेछ। यदि डुङ्गा पहिलो पटक रुकिएको छ भने, यो 1 घण्टा वा त्यसैले लिन सक्दछ।
A: कृपया अन्यथा पढ्न सक्ने के नदेखाउनुहोस् - Koh टच मात्र एक पार्टीको स्थान होइन! हो, मुख्य क्षेत्रको लागि एकदमै ठूलो उमेरको लागि प्रतिष्ठा छ, तर त्यहाँ धेरै अन्य क्षेत्रहरू जुन शान्त, आरामदायी छन् र साँच्चिकै मेमोरेजिङ छन्। कृपया हाम्रो पढ्नुहोस् होटल गाइड र समुद्र तट गाइड थप जानकारीको लागि।
A: सबै चारैतिर एक तारालाई आकाश जस्तो चमक गर्दै, बायोलिमाइनन्ट प्लान्टन एक अद्भुत दृष्य हो जुन रातको समय हेरेर।
यदि तपाईं Koh टच टिपमा बस्दै हुनुहुन्छ, त्यसका लागि प्लान्टन एक डुङ्गा भ्रमणको भ्रमण गरेर हेर्नु भएको छ (तपाइँ पनि गैर-पार्टीका रातहरूमा पुलिस बीचमा जान सक्नुहुन्छ (मुख्य भेटीबाट 15 मिनेटहरू) र ट्री हाउस बङ्गले ( 15 मिनेट सही ढेरबाट)।
A: हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईं धेरै पैसा, मच्छर स्प्रे, सूर्य तरण लोशन, र कुनै अन्य आवश्यकताहरू ल्याउनुहुन्छ। कोहि टचमा धेरै साना पसलहरू छन् जहाँ तपाईले तपाईंलाई आवश्यक हुन सक्ने सबै भन्दा बढि खरिद गर्न सक्नुहुनेछ, तर मूल्यहरू बढ्न सक्छ त्यसैले तपाई जानु अघि गर्नु आवश्यक पर्दछ।
A: हुनत त्यहाँ कुनै एटीएम छैन, तपाईं अझै पनि तीन Eftpos टर्मिनलहरुमा नकद आउट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ - ग्रीन महासागर गेस्टहाउस, व्हाइट गुलाब गेस्टहाउस र Koh Lanta मा एक Eftpos टर्मिनल छ।
A: हो, Koh Touch मा एक चिकित्सा सुविधा हो। कृपया कसैलाई सोध्नुहोस् जब तपाईं त्यहाँका लागि हुनुहुन्छ।
A: हां, वहाँ कोहि टच मा परिवार को अनुकूल स्थलहरु धेरै चुप हो। कृपया हाम्रो हेर्नुहोस् होटल गाइड र समुद्र तट गाइड थप जान्न।
A: Koh Rong कम्बोडियाले लोकप्रिय वास्तविकता कार्यक्रम 'सर्भोर' धेरै पटक आयोजना गरेको छ।
2015 मा, सर्भेर को अमेरिकी संस्करण सिजन एक्सएनमक्स (उत्तरजीवी: कम्बोडिया - दोस्रो मौका) र सीजन 31 (बचाव: काह रोंग-ब्रेन्स बनाम ब्राउ बनाम ब्यूटी) को कोओ रङ आइल्याण्ड मा प्रस्तुत गरियो।
अभियान रोबिन्सन (स्वीडेनको सर्भोर) को 16th संस्करण पनि द्वीपमा फिलिम गरिएको थियो।
Koh Rong भ्रमण गर्नुहोस् » Koh Rong को बारे मा » कोह टच